आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहनुभएको छ ? ८ टिप्स - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहनुभएको छ ? ८ टिप्स
जीवन सधै एकै लय बग्दैन । हरेक दिन नयाँ नयाँ परिस्थितिहरु सिर्जना हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं आफूलाई एकदमै कमजोर महसुस हुन्छ । त्यो कमजोरपनलाई व्यक्तिले सही समयमा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यो एउटा सिकाइ बन्छ, बलियोपनमा परिणत हुन्छ भने त्यो कमजोरपनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने जिन्दगी नै खतरामा पुग्छ ।
कमजोर महसुस गरिरहनुभएको छ ? ८ टिप्स
आफूले पढिरहेको क्षेत्र या काम गरिरहेको क्षेत्रका नयाँ कुराहरु खोजेर पढ्नुहोस् । इन्टरनेटमा त्यस्ता कुराहरु सजिलै उपलब्ध हुन सक्छन् । आफ्नो काम या पढाइको क्षेत्रको नयाँ कुरा सिक्न पाउँदा तपाईंमा नयाँ उत्साह जाग्छ । त्यस्तै, काम या पढाइमा पछि परें भनेर निराश हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, सबैका आ-आफ्ना विशेषता हुन्छन् । आफ्नो विशेषता पत्ता लगाउनुहोस् । र, सधै यो बुझ्नुहोस् कि, काममा मान्छे काम गर्दै गएको अनुभवको आधारमा राम्रो देखिन्छ । नअत्तालिनुहोस्, कामलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
साथीहरुसंग भेटघाट गर्नुहोस् । केही समय साथीहरुसंग बिताउने, गफ गर्ने, रमाइला पल सम्झने गर्नुहोस् । आफ्ना मनका कुरा एकअर्कालाई बताउँदा मन हलुका हुन्छ, दिमाग ताजा हुन्छ र हिम्मत बढ्छ ।
परिवारको सम्पर्कमा रहिरहनुहोस् । परिवारका सदस्यसंग बसेर गफगाफ गर्नुहोस् । घरमा सानो-तिनो काम गर्नुहोस् । टाढा हुनुहुन्छ भनेपनि परिवारका सदस्यलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई भावनात्मक रुपमा बलियो बनाउँछ ।
आफूले पछिल्लो समय हासिल गरेको उपलब्धि सम्झिनुहोस् र आफ्ना आगामी योजनाहरुलाई सम्झेर डायरीमा टिप्नुहोस् । सफलतालाई कुनै गन्तव्यको रुपमा नलीई यात्राको रुपमा लिनुहोस् । यिनै अप्ठ्यारा, चोट, धोका, असफलता आदिले नै तपाईंलाई बलियो बनाउँछन्, जसले गर्दा त्यो यात्रामा हिड्न सजिलो हुन्छ । यसले तपाईंमा जीवनप्रति प्रेम हुन्छ ।
जीवनको मूख्य व्यक्ति तपाईं हो र तपाईंको जीवनको यात्रामा अगाडी बढिरहनुभएको छ । बाटोमा कति मान्छे भेटिन्छन् , छुटिन्छन् । त्यसैले कोही आफ्नो जीवनबाट गयो भन्दैमा कमजोर नहुनुहोस् । तपाईंले जीवनमा गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन्, पूरा गर्नुपर्ने सपना छन्, जिम्मेवारी छन्, आफ्ना व्यक्तिगत चाहना छन् । ती कुरामा ध्यान दिनुहोस् । जिन्दगीको प्राथमिकतालाई छुट्टाउनुहोस् । तपाईं अरु कसैको लागि आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न पक्कै जन्मनुभएको होइन ।
वृद्धाश्रम, अनाथालय, आध्यात्मिक क्षेत्र, आश्रय स्थलमा जानुहोस् । त्यहाँ केही समय बिताउनुहोस् । त्यसपछि तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि, तपाईंसंग ती थुप्रै कुराहरु छन्, जुन अरुसंग छैनन् । यसको लागि विभिन्न मानिसका जिन्दगीका कथा पढ्ने, हेर्ने गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
निन्द्रा पुग्नेगरि सुत्नुहोस् र बिहान उठेपछि व्यायाम या योगा गर्नुहोस् । प्रशस्त पानी पिउनुहोस् । आफूलाई अत्यन्तै मिठो लाग्ने या आफूलाई खान मन लागेको खानेकुरा खानुहोस् । केही समय हरियाली भएको ठाउँमा गएर बस्नुहोस् । आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिनुहोस् । घरको सरसफाई गर्नुहोस् । आफ्नो हेरचाह गर्नुहोस् ।
रुन मन लागेको छ भने रुनुहोस् । रुनु कुनै कमजोरी होइन । यति रुनुहोस् कि, त्यसपछि त्यो कुरालाई सम्झेर आँशु नै नझरोस् । तपाईं हुनुहुन्छ र त तपाईंको संसार छ । आफ्नो आत्मसम्मानको लागि स्वार्थी पनि बन्न सिक्नुहोस् ।
Previousकथा : मयुरको सुन्दरता
Nextहत्केला नभएकी बालिकाले जितीन् राष्ट्रिय हस्तलेखन प्रतियोगिता